Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xannibnaa Uganda oo Muqdisho dib loogu soo celiyay +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xannibnaa Uganda oo Muqdisho dib loogu soo celiyay...
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xannibnaa Uganda oo Muqdisho dib loogu soo celiyay +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa Magaalada Muqdisho gelinkii dambe ee Isniinta maanta ah dib loogu soo celiyay Muwaadiniin Soomaaliyeed oo billihii ugu dambeeyay ku xayirnaa waddanka Uganda.
Muwaadiniintan oo u badan arday wax ka baraneysay dalka Uganda ayaa waxaa saamayn ku yeeshay kala xir xirnaanta ka dhalatay, markii uu dunidii saameeyay Cudurka Coronavirus (COVID-19).
Safaaradda Soomaaliya ee Magaalada Kampala ku taala ayaa fududeysay dib u soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed, ka dib markii ay iska diiwaangeliyeen Xarunta Safaaradda.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed oo tiradoodu ay gaareyso 84 qof ayaa waxay Magaalada Kampala ka soo raaceen diyaarad gaar ah, taasoo ka soo dejisay Garoonka Aadan Cadde International ee Muqdisho.
Muwaadiniintan qaarkood ayaa waxay ku wajahan yihiin Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland, halkaasoo ay markii horeba ka yimaadeen.
Ka hor inta aan muwaadiniintan dalka dib loogu soo celin ayaa la hubiyay xaaladooda caafimaad, iyagoo dhanka kalana Diblomaasiyiinta Safaaradda kaga mahadceliyay fududeynta ah in dib dalkooda loogu soo celiyo.
Muwaadiniintan Soomaaliyeed waxaa ay markaan dalkooda ku soo laabteen, iyadoo uu afka u duuban yahay, taa oo qayb ka ah dadaalada lagu xakameyn karo faafitaanka Cudurka dilaaga ah ee Coronavirus.
dalka lagu soo celiyay